Qalabka Beerida Bixinta, Brewhouse, Fermenter, Brite Tank - Ningbo COFF Makiinado Co., ltd
Qalabka & Bixinta
Ningbo COFF Makiinado Co., Ltd waa naqshadeeye sare xirfadle iyo soo saare ah oo tayo sare leh qalab soo saarida biirka farsamada ee Shiinaha oo leh adeeg aad u fiican.
Waxaan diiradda saareynaa soo saarista Qalabka Biirista Biir-dhamaadka sare. Waxaan leenahay tas-hiilaad aad u fiican oo loogu talagalay soo saarista maraakiibta birta ee heerka koowaad ee adduunka ee biirka, khamriga, caanaha, aalkolada, kiimikooyinka wanaagsan, daawada, iwm.
Ma nihin kaliya soo saaraha qalabka biirka farsamada laakiin waxaan sidoo kale waxbadan ka ogaanaa dhaqanka biirka farsamada iyo farshaxanimadiisa gaarka ah. Waxaan had iyo jeer diirada saarnaa cilmi baarista iyo horumarka macaamiisha ku wajahan waxaana ujeedkeenu yahay inaan muujino qaabka farshaxanka ee faahfaahin kasta oo alaabada ah si aan u siino alaab tayo sare leh iyo adeeg qiimo leh.
Qalabkayaga iyo adeegga microbrewery wuxuu sumcad sare ku helay Mareykanka, Kanada, Boqortooyada Ingiriiska, New Zealand, Australia, Japan, Ruushka, iyo waddamada kale ee Eurasia iyo gobollada. 80% macaamiisheennu waxay ka yimaadeen talo soo jeedinta lammaanahayada. In kabadan 90% macaamiisha waxay dhisaan xiriir iskaashi oo waqti dheer ah. Ku soo dhowow booqashada iyo iskaashiga COFF!
Aagayaga warshadaha wuxuu daboolayaa aag dhan 220 kun oo mitir murabac ah. Waxaan haynaa mid ka mid ah aqoon-isweydaarsiyada ugu waaweyn ee warshadaha qalabka beerta Shiinaha. Waxay qaadataa hal saac iyo afartan daqiiqo in laga kaxeeyo garoonka diyaaradaha caalamiga ee Shanghai Pudong ama afartan daqiiqo in laga dhoofo garoonka Ningbo.
Waxaan dhisnay koox ka kooban 10 injineerro iyo nashqadeeyayaal, gaar ahaan halkan waxaa jooga shan injineero sare oo in ka badan 15 sano oo khibrad ah ka caawinaya warshadaha farsamada inay horumariyaan oo ay mustaqbalka wax cusub ikhtiraacaan.
Shaqaalaheenu waxay heleen shahaadada alxanka ASME.
Wax soo saarkayagu waxay heleen shahaadada ASME, AS1210.
wareejinta sanadlaha ah （milyan Yuan）
xarunta wax soo saarka （m²）
dawaarle made sano）
Isbarbardhiga kuleylka kuleylka dhaqameed, Nidaamka kuleylka saliida kuleylka ee Coff wuxuu siinayaa suurtagal dheeraad ah yareynta isticmaalka tamarta
iyadoo lagu gaarayo waxqabad isku mid ah ama ka wanaagsan.
100% wuxuu ka sameysan yahay bir bir ah oo aan la xaqiijin. Kormeerayaasha aan howsha wadin waxay bixiyaan awoodaha baruurta oo si buuxda u shaqeynaya iyo ugu yaraan 2 jeer tijaabooyinka hawlgalka kahor dhalmada.
Guddi adeegsade-saaxiibtinimo waa fududahay in la fahmo waxayna u oggolaaneysaa kormeer fudud iyo xakameynta geeddi-socodka qamriga. Suurtagalnimada in la fuliyo nidaamka talaabooyinka badan, muujinta qiimaha dhabta ah iyo kuwa la dejiyay.
Naqshadaha oo dhan-ka-mid ah oo lagu qalabeeyay nidaam qaboojiye iyo kuleyl oo dahaaran, gabi ahaanba tuubooyin laguna xiray fiilooyin isku dhafan.
Ha ku xaddidin awooddaada khamriga ee qalabka xun, waxaan u soo saarnaa macmacaankaaga nolosha waxqabad sarreeya, maraakiibta wax soo saarka qiimaha-wax ku oolka ah
Waxaan dhididnaa faahfaahinta si loo hubiyo inaad haysato alaab tayo sare leh iyo adeeg xirfad leh.
Nidaamka kuleylka saliida ee kuleylka ah
DIYAARADII UGU DANBEEYAY
SHAQAALAHA ARON: WAXAA JIRA AQOON BADAN OO AADAN KU OGAAN KARN INTAAD JABTAY
Khamriga biiridda, geeddi-socodka mashiinka, caarada, karkarinta, qaboojinta iyo halsano ayaa lakala saaray, kaas oo karkarinta sida caadiga ah feejignaan yar laga bixiyo. Sababta Guud ahaan, dadku waxay u maleynayaan inay kaliya waqti ku qaadaneyso daawashada joornaalka ku karinaya murugada. In kasta oo xaqiiqda, habka karkarku uu yahay mid aad muhiim u ah ...
Casaan Cas (shaciir)
Uruurinta wort asalka ah: 12P Alcohol ABV: 4.5% Qiimaha qadhaadhka IBU: 12 Qalabka ceeriin: Australia iyo farantiis malt, khamiirka ingiriisiga faransiiska, USA iyo jarmalka jarmalka, biyaha macdanta ee adag ee dhexdhexaadka ah. Ogeysiiska dhadhanka: biir cusub oo aad isu dheelitiran oo sarreen iyo dhadhan miraha leh. Wixii ...
MAXAY KU KALA DUWAN YAHAY QAMIIRKA IYO BILAASHKA
Qanacleyda shaciirku waa biir dhan oo qamadi ah (qamadiga oo dhan waa biir ay kujiraan walxo cayriin ah 11 ilaa 13 ° P) .Guud ahaan cabitaanka khamrigu waa 4.8-5.0% vol. , oo leh malt gubtay, jaalle xoog leh Qamadi qallalan Waa dar ...
Waxaan nahay Nakhshadeeye Halyeeye Hormuud ah oo soo saare ah Qalab Xirmo Qalab Beer-abuur tayo sare leh
Soo Koob Natiijada Naxashka la Kulmay ...
La daabacay: 2020-07-10
Adeegga Soo iibsiga ee loogu talagalay Hubka ...
2017 Munich Jarmalka
XUQUUQDA © 2020 NingBo COFF Makiinado Co., ltd. DHAMMAAN XUQUUQDA WAA LA keydiyey